Nin baaskiil ku tagey Ruushka sii uu ula kulmo Messi - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka Clifin Francis
Image caption Clifin Francis wuxuu kaxaynayaa baaskiil
Clifin Francis wuxuu fadhiyay gurigiisa oo ku yaalla Koonfurta Hindiya markii mid ka mid ah saaxibadiis uu weydiiyay inuu ka qayb galayo iyo in kale Koobka Adduunka.
Wuxuu ku jawaabay "dabcan haa, waxaa laga yaaba in aan u safro Ruushka si aan ugu daawasho tago cayaaraha".
Francis waa macallin dhiga maaddada xisaabta, wuxuuna maalinkii qaata 30 ilaa 40 Doollar, isla markaana ma uusan awoodin inuu helo lacagaha lagu raaco diyaaradda.
Clifin Francis wuxuu yiri " Ma haysto lacagtii aan ku safri lahaa si aan muddo bil ah u joogo Ruushka, waxaan is weydiiyey siyaabaha ugu fudud ee aan ku tegi karo Ruushka, waxaana ii soo baxday in aan baaskiil ku safro"
Saxiibadiis ma aysan aaminin in ay u suuro geli doonto inuu baaskiil ku tegi doono Kooobka Adduunka .
23-kii Febraayo ee sannadkan wuxuu diyaarad ku yimid magaalada Dubai, ka dibna wuxuu uga sii gudbay dalka Iiraan, halkaasoo caasimadda Ruushka u jirta 4,200 oo kilomitir.
Clifin Francis wuxuu doonaya oo kaliya ah inuu helo fursad uu ku arko cayaaryahan Lionel Messi oo u dheela kooxda kubadda cagta ee Argentina, wuxuuna rumaysan yahay inuu yahay cayaaryahanka ugu wanaagsan adduunka.
Francis wuxuu BBC-da u sheegay inuu jecel yahay kaxaynta baaskiilka iyo cayaarta kubadda cagta.
Wuxuu rajaynayay markii hore inuu soo maro dalka Pakistan balse wuu ka laabtay go'aankaasi, xiriirka aan wanaagsanayn ee kala dhexeeya Hindiya darteed.
'Cayaaraha iyo filinka'
Francis wuxuu sheegay inuu baddalay qorshihii uu ku tegi lahaa Pakistan, oo ay ku khasabtay inuu diyaarad ku yimaado magaalada Dubai sii uu halkaasi uga iibsado baaskiil qiimiihisu yahay 700 doolar sii uu ugu tego dalka Ruushka.
Wuxuu gaaray dalka Iiraan 11-kii bishii Maarso, halkaasoo uu muddo 45 cisho ah ku qaatay.
Francis wuxuu sheegay in maalin kasta uu isticmaalayay 10 doolar, dadka reer Iiraan ay si wayn usoo dhaweeyeen.
Image caption Clifin Francis wuxuu la kulmay dad badan intii uu baaskiilka kaxaynayay
Image caption Francis oo baaskiil ku wado dhul u dhexeeyo dalka Iiraan iyo Azerbaijan
Nin lugeeyay in ka badan kun kilomitar si uu ula kulmo Ra'iisul wasaare
Askeri ka baxsaday Kuuriyada Waqooyi oo shan xabbadood lagu dhuftay
Francis wuxuu yiri "in baaskiil aad ku dhex waddo Iiraan way ii fududayd, sababtoo ah waa dal leh dhul qurux badan".
Wuxuu sheegay inuu ku biiri doono taageerayaasha reer Iiraan ee Ruushka ku sugan.
" Dadka reer Iiraan waxay jecel yihiin aflaanta Bollywood, waa run in cayaaraha iyo aflaanta ay midaynayaan adduunka"
Baaskiil kaxaynta oo caato ka dhigay
Clifin Francis wuxuu baaskiil kaga baxay Iiraan wuxuuna gaaray dalka Azerbaijan halkaaso in muddo lagu haystay xadka sii loo xaqiijiyo dokumentigii uu ku safrayay.
Wuxuu yiri "Waxaan ku caatoobay baaskiilka sababtoo ah muuqaalka sawirka baasaboorkayga iima ekayn, 8 saacadood ay igu qaadatay in saraakiisha socdaalka ay ii fasaxaan in aan galo dalka Azerbaijan"
Image caption Francis oo sawir la galay qof uu la kulmay intii uu safarka ku jiray
Farncis ma uusan awoodin inuu iska bixiyo kharashaadka huteelada dalka Azerbaijan, balse wuxuu seexanayay dhul seere ah.
Wuxuu ku xannibmay 'dhulka aan cidna lahayn'
Francis markii uu gaaray xadka dalka Georgia waxaa loo diiday inuu galo dalkaasi, wuxuuna go'aansaday inuu dib ugu soo laabto dalkii uu ka tagey Azerbaijan.
Maalin idil ayuu ku xayirmay dhul aan cidna lahayn oo u dhexeeyo dalalka Georgia iyo Azerbaijan.
Wuxuu raadiyay waddo kale oo gayn karta Ruushka, qof ayaana u sheegay in dalka Azerbaijan uu Ruushka xadka kala wadaago deegaan la yiraahdo Dagestan.
Degestan ayuu u ambabaxay inkastoo goobtaasi ay ka jirto ammni darro. 5-tii bishan June ayuu galay dalka Ruushka.
Image caption Clifin Francis oo dad la joogo xilligii safarka baaskiilka uu ku jiray
Markii u tagey gobolka Dagestan waxaa ku adkaatay inuu la qabsado luqadda dadka halkaasi ay ku hadlaan.
Wuxuu yiri "dadka waxay la yaabeen qof Hindiya u dhashay oo baaskiil ku kaxaynaya deegaanka, waxaan isticmaalay luqad aan isaga dhigaya midda ay ku hadlaan cayaartooyda iyo dadka aflaanta jilo si aan uga qosliyo dadka Ruushka"
Francis hadda wuxuu baaskiil ku tagey magaalada Tambov oo 460 kilomitar u jirta caasimadda Moscow, 26-ka Juun ayaa lagu wadaa inuu gaaro Moscow si uu uga qayb galo cayaarta halkaasi ku dhex mari doonto Faransiiska iyo Denmark.
Wuxuu yiri "waa cayaarta kaliya ah ee aan helay tikidkii aan ku daawan lahaa"
Francis wuxuu yiri "Waxaan taageero u ahay Kooxda Argentina iyo cayaaryahan Lionel Messi, waa riyadayda in aan la kulmo Messi oo aan ka codsado inuu astaan ku qoro baaskiilka"
Clifin Francis wuxuu sheegay in safarkiisu uu dad badan ku dhiiri gelin doono cayaaraha iyo layliga jirka.
Wuxuu yiri "waxaan doonayaa mar uun in Koobka Adduunka ay ka soo muqdaan cayaartoyda Hindiya, waxaan sidoo kale rajaynayaa in dad badan ay xiisayn doonaan baaskiil kaxaynta marka ay akhriyaan sheekadayda"
Image caption Clifin Francis oo la kulmay carruur
Francis ayaa sheegay inuu faraxsanaan doono, waa haddii safarkiisu uu carruurta dalka Hindiya ku dhiirri geliyo inay u cayaaraan xulka qaranka.